Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Stockholms län / Haninge
Haninge waxeey u jirta magaalada Stockholm 20 daqiiqo waxayna ka mid tahay degmooyinka ugu waweeyn gobolka. Degmada Haninge waxaad ka heli guryo waanagsan, center weyn oo sii weeynaneysa dukaamo badan iyo kaafeteriyaal, waxaana ka heleysa jasirado yaryar iyo dabeecado waanagsan. Haninge qof kasta wuxu jecelyahay wuu ka heli.
2,177 kiilomitir oo laba jibaaran
Göteborg 475 kiilomitir
Malmö 620 kiilomitir
Haninge bostäder ​ waa shirkad ey degmada iska leedahay waxana saf u istagi karta sidaa guri lagu siiyo. Shirkadooyin kale u qof sii gaar u leeyahay wii jiraan oo degmada guryo ka kiireya. Degmada Haninge guryaheeda waxeey u dhigmaan boqolkiiba 43 guryo yaryar, boqolkiiba 25 gurya laa ijaaro oo ku yaal dhismo ka kooban guryo badan hyresrätt boqolkiiba 32 guryaha la badh iibsado oo ayagan ku yaala dhismaha guryaha badan ka kooban.
Afar qeeybood hal qeyb oo ka mid ah dadka dagan degmada Haninge waxey ku dhasheen waddamo kale. Wadaamadasna waxeey kala yihiiin, Iswiidhan hadda laga reebo, dalka Booland, Fiinland, Turkiga iyo dalka Chile. Ilmaha iyo dhalinyarta dagan degmada waxa loo haaya barashada afka hooyo, degmada Haninge waxaa ka dhignaa 40 luqadood oo kala duwan. Wixii dheeraad ah oo ku saabsan barashada afka hooyo waxad ka akhrisan degmada Haninge boggeda internetka.
Degmada Haninge waxaa ku yaala jaaliyado badan oo isugu jira kuwa ciyaaraha, dhaqanka iyo kuwa siyaasada. Qof kasta wuxuu xiiso u haayo wuu heleyaa. Jaaliiyadaha firifircoon oo dhan ee ka jira degmada waxaad ka heli kartaa liiska diiwaangalinta jaaliyadaha ee degmada.
Degmada Haninge waxaa ku yaala goobo badan oo lagu ciyaaro xilli firaaqaha waxaana ku yaala meelo badan oo lagu dabaasho iyo dabeecad wanaagsan. Waxaa kaloo ka heleysaa degmada kaanisado iyo ururyo diimeed badan.
Haninge waxaad ka heleysa warbixin degmeed, xafiiska shaqada, adeegga bulshada, xafiiska ceymiska. suuqa Handen waaxad ka heleysaa dukaamo badan iyo makhaayado. agagaarka suuqa Handen waxaa ku yaala suuqyo iyo dukaamo waaweyn.
Degmada waxa ku yaala dukaamo badan oo gada dhar, maacuun iyo alaabta guriga. Waxaana ka mid ah degmada dukaankeeda gacan labaadka ee secondhand-butik Fyndet​ lacagta soo gasha waxaa wax loogu qabtaa dadka shaqo la'aanta heeyso ee degmada dagan.
Degmada waxaa ku yaala lix maktabadood oo kala ah: Brandbergen, Handen, Jordbro, Orn, Västerhaninge iyo bokbussen. Maktabada waxaad ka deeynsan kartaa buugaag iyo joornaalo, kombiyuutarro internet heeysto iyo caawimaad aad ka heleysid shaqaalaha maktabada.
Degmada Haninge waxaa ku yaal dugsiyada xanaanada caruurta iyo guryaha xanaanada caruurta, waxeeyna isu jiraan kuwo degmada iska leedahay iyo kuwo gaar loo leeyahay. Caruurtaada waxey bilaabi karaan xanaanada markeey hal sano buuxiyaan. Waxa jira labo xanaanooyinka furan ah oo dadka oo dhan tagi karan, waana lacag la'aan.
Degmada waxaa ku yaal in la'eg labaatan dugsiyo hoose-dhexe iyo toban dugsiyo hose-dhexe oo sii gaar loo leeyahey. ​Haninge wuxaa ku yaala dugsiga sare ee Fredrika Bremergymnasierna​ waxaana xukuma degmada. Waxaa kaloo ku yaal degmada lix iskool oo kala heeysta barnamijyo kala duwan. Waxaa kaloo ka heleysaa dugsi sare oo gaar u ah kheyraadka dabiiciga ah.
Degmada Haninge waxaad ka heleysa fursado badan oo waxbarasho oo dadka waaweeyn loogu tala galay. Qofka buuxiya labatan sano wuxuu bilaabi karaa xarunta Centrum Vux. Waxaad baran karata koorsooyin xisaab ama luqad.waxaa kaloo jira xirfado kala duwan oo aad baran kartid. Waxaadna dhigan kartaa maalintii ama habeenkii. Xarunta Centrum Vux waxaad ku baran kartaa luqadda iswiidhishka oo loogu tala galay muhaajirinta.
Jaamacada Kungliga Tekniska Högskolan waxaad ka baran kartaa barnaamijyada la xiriira teknaloojiyada, iskoolka dadka waaweyn ee Alma folkhögskola waxaad ku dhameystiran kartaa maadooyinka aadan ku baasin ee dugsiga sare.
Waxbarashada dadka waaweyn Iswiidhiska soo galooytiga Alma folkhögskola
Degmada Haninge waxaa ku yaala dhowr ah ruggaha caafimaadka, rugaha caafimaadka caruurta iyo xitaa rugta qaabilaada dhalinyarada. Waxaa jira xitaa dhowr ah dhakhtarada ilkaha iyo rugta caafimaadka hooyoada oo laga helo isbitaalka Handens. Waa maamulka gobolka Stockholm kuwa mas'uulka ka ah in dadka ku nool helaan daryeelka caafimaadka iyo bukaanka ee ay iyagu u baahanyihiin.
Hadaadan fahmeyn luqadda iswiidhishka xaq ayaad u leedahay in turjubaan laguu qabto markaad la kulmeeysid xafiisyada kala duwan. Xaq waad u leedahay turjubaan hadaad ka dhaawacantahay xagga maqalka ama hadalka. Degmada Haninge ayaad u sheegeysaa hadaad u baahantahay turjubaan, anagaa kuu diyaarineyno.
Degmada Haninge waxaa laga qaataa tareen ama bass. Meelaha jaziiradaha yaryarna waxaa ku badan doomaha. Isteeshinada uu istaago tareenka waa Handen, Jordbro, Västerhaninge, Krigslida, Tungelsta iyo Hemfosa marka laga billaabo dhinaca waqooyi. Xaafadaha kale waxaad ku tagi kartaa basaska jazirahana waxaad ku tagi kartaa doomaha. Shirkadda SL boggooda internetka waxaad ka iibsan kartaa safaradaada waxaad kaloo ka heli kartaa qiimaha tikidada iyo waxyaabo kaloo badan.
Degmada Haninge waxaa ka jira in ka badan 6000 oo shirkadood oo kala duwan. Waxaa ka jira Shirkado yaryar iyo shirkado caalami ah sida coca cola. Degmada ayaa ah shaqa bixiyaha ugu weyn ee Haninge waxaana ka shaqeeya qiyaastii 5000 oo shaqaale. Laakiin maadaama aad bartamaha Stockholm aad ku tagi kartid 25 daqiiqo gudahood waxaad ka shaqeyn kartaa meel kasta oo Stockholm dhexdeeda ah.
Hadaad shaqo ka raadineysid shaqo degmada Haninge waxaad aaddaa xafiiska shaqada oo xafiis ku leh xaafada Handen, halkaasoo aad ka heleysid caawiska aad u baahan tahay. Xarunta degmada ee Kommunens arbetscentrum waxuu caawiyaa dadka eey ku adagtahay ineey shaqo caadi ah helaan. Halkaan waxaa lagaa caawinaa sida aad baraktiik ama shaqo u heli laheyd. Hadaad rabtid inaad shirkad furatid waxaad la xiriirtaa NyföretagarCentrum.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Haninge